The Motorola P40 na Moto Z4 Play na-edozi site na ntụgharị ha | Gam akporosis
Motorola P40 na Moto Z4 Play na-edozi site na nsụgharị ha
Ihe osise nke Motorola P40 na Moto Z4 Play tinyere ya nkọwapụta leaked urua gara aga na net. Ugbu a, ụdị igbe ndị leaky nke Motorola P40 na Moto Z4 Play apụtala iji kwado data edegoro.
Ọzọ, anyị na-egosi gị sụgharịrị ngwaọrụ abụọ a na-adịbeghị anya leaked online.
1 Motorola P40 - Ndị na-ede ihe
2 Motorola Moto Z4 - Ndị na-akwụ ụgwọ
Motorola P40 - Ndị na-ede ihe
Ihe nkpuchi Motorola P40 ekpughere na azu nke ekwenti ga-egosipụta ndozi igwefoto abụọ na oghere maka akara Motorola tinyere ihe nyocha mkpisi aka. Cutouts maka ụda egwu 3,5mm, ndị na-ekwu okwu n'okirikiri, na ọdụ ụgbọ USB-C nwere ike ịhụ na igbe P40.
Motorola P40 ga-abụ ekwentị mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ iji rute na ihuenyo mkpuchidị ka smartphones Huawei Nova 4, Sọpụrụ V20 y Samsung A8s AX nke emepere n’oge na-adịbeghị anya. Asịrị nwere na ọ ga-egosipụta ihu igwe LCD nke 6.2-inch.
A na-atụ anya na Chipset Snapdragon 675 ike mbipụta nke 64 na 128 GB nke ekwentị na 6 GB nke Ram. O yikarịrị ka ọ ga-enwe batrị 4,132 mAh. Akụkụ ndị ọzọ nke asịrị ekwentị gụnyere nhazi nke igwefoto abuo, dika anyi siri kwuo, 48 megapixels + 5 megapixels na azu, a 12-megapixel n'ihu shooter na nkwado maka NFC Njikọta. Ọ ga-abụ ihe gam akporo Otu ngwaọrụ na-agba ọsọ na ngwaahịa mbipụta nke A gam akporo 9 achịcha.
Motorola Moto Z4 - Ndị na-akwụ ụgwọ
Lọ nke Moto Z4 Play ikpe ekpughere na ọ ga-egosipụta akara mkpụmkpụ maka igwefoto azụ. Asịrị nwere ya, n'adịghị ka ntọala igwefoto abụọ dị na Moto Z3 Play nke bu ụzọ, na-abịa Z4 Play ga-Njirimara otu azụ igwefoto.
Enweghi mbelata maka nyocha mkpisiaka na Moto Z4 Play, na-egosi na ọ nwere ike ịbụ otu n'ime ekwentị Motorola mbụ nwere ihe nyocha akara ngosi mkpịsị aka. Enwekwara ikpe Z4 Play na cutouts maka jaakụ ọdịyo 3,5mm, ọkà okwu ike, na USB-C.
Gara aga akụkọ v na-atụ aro na Moto Z4 Play ga-abịa na a 16-pin pogo njikọ maka attaching na Moto Mods ngwa n'azụ, dị ka ụdị ndị gara aga. N'ụzọ dị ịtụnanya, ndị sụgharịrị ikpe ahụ egosighi mkpachị ọ bụla maka ya.
Ekwentị ga-egosipụta ngosipụta ọkaibe mmiri yana gịrịgịrị ike na bezel. A na-atụ anya ka ọ bịa na ihuenyo AMOLED nke nwere 6.2-inch. Ọ nwere ike ịbụ na a ga - akwado ya Chipset Snapdragon 670 ma ọ bụ Snapdragon 675.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Motorola P40 na Moto Z4 Play na-edozi site na nsụgharị ha
Nokia 8 Sirocco emelitere emelitere na gam akporo achịcha
Ọ bụ gọọmentị: A ga-eweta Galaxy S10 na 20 nke February